Hotel yokubhuka "Ukubhukha bani" - Umsebenzisi Izibuyekezo
Singasho kugcwale umlomo ukuthi lesi simiso intanethi "Ukubhuka dot com" ingenye ethandwa kakhulu, ephephile futhi inzuzo kulo kuyi-Internet. Abantu bathemba ke. Ubufakazi lena okungenani yokuthi abasebenzisi abaningi bahlale bethembekile kuye iminyaka. Kulesi sihloko sizama ukuqonda ukuthi yini zikhanga kangaka, isibonelo, abahambi abakhuluma isiRashiya kule sayithi futhi kungani bayajabula ne.
"Ukubhuka com" - inkimbinkimbi Izibuyekezo yokubhuka
Omunye amabhonasi ezinkulu ahlinzekwa kulesi simiso alula nesivinini. Qonda ukuthi ukunikela bese ugcwalisa izinto edingekayo kungaba ngisho ingane. Ngaphezu kwalokho, yena ngokushesha kuqinisekisa isicelo sakho futhi ngeke sikukhokhise noma yiziphi izimali ezikhokhiswayo ngoba kuye "yokubhuka" (ukubhuka). Idatha ehhotela olikhethile agcinwe ikhasi elibalulekile. Ungakwazi uhlala uvuliwe futhi ukuphrinta - kokubili ngesiRashiya bese ngolimi yezwe lapho uya khona. Lesi sakamuva kakhulu Kunconywa, ngoba lula ukuxhumana sokuqondisa ehhotela oyifunayo.
"Ukubhuka com" - mayelana uhlelo izici Izibuyekezo
Le sayithi muhle futhi ngoba kunika ithuba ukubona izinzuzo nezingozi ehhotela, incazelo yalo, izithombe, izibuyekezo. On the "izingibe" ahlukahlukene - isibonelo, izidingo ezikhethekile noma inkokhelo eyengeziwe sendleleni - okufanayo Ungahlala kungatholakala kule webhusayithi. Lolu hlelo kuzuzisa kakhulu kulabo uthanda encane, ethokomele ehhotela umndeni kuyinto amakamelo ezimbalwa nje. Phela, nabo basuke ngokuvamile abanalo siqu iwebhusayithi noma ukubhuka izinhlelo, kanye nabasebenzi babo akuzona kahle isiNgisi ngaso sonke isikhathi. Kodwa nge "Buckingham", ungakhetha noma yisiphi sazo, noma omunye ukuthi wamukela imali kuphela. Ngakho, ngokusebenzisa le sevisi, ungathola njalo ehhotela ngendlela ethandwa nguye.
"Ukubhuka com" - mayelana izaphulelo kanye ukukhushulwa Izibuyekezo
Abanye abasebenzisi bakholelwa ukuthi intengo yokuhlala kule sayithi lingaphezulu kunakwezinye. Abanye uphikisana kubo ukuthi isayithi ngokuvamile inikeza izaphulelo ezinkulu kakhulu ahlinzekwa kokubili yihhotela kanye uhlelo yokubhuka. Ngaphezu kwalokho, isayithi inohlelo ezahlukene ukuhlunga amahhotela ngenani, udumo, noma amasevisi anikezwa. Kulokhu, ungacacisa in the "ukucinga" izinsuku ngemigomo yakho, bese kudingeke afune okuthile esifanelana, bese ukhetha isabelomali noma inketho okukhethekile "Wai-FEMA" Pet Friendly, ichibi esophahleni futhi konke ezikufunayo. Ukuze izivakashi njalo, owanikhipha kule akhawunti inthanethi, kukhona isiphakamiso ethakazelisa kakhulu. Ngokwesibonelo, "intengo smart", ehlanganisa amabhonasi ehlukahlukene - ibhulakufesi khulula, lapho ngokuvamile ngemali yokuhlala ukubaluleka ezikhathini ezimbili noma ngaphezulu ngaphansana kusayithi ehhotela, ngasekupheleni phuma, nokunye. Into esemqoka - ukuba ukwazi indlela ukusebenzisa le nsiza.
"Ukubhuka com" - mayelana nokuphathwa Izibuyekezo
Abasebenzisi abaningi baye babika ukusabela okuhle futhi fast izinkinga indawo ukuphathwa. Uma ihhotela kukhona izinguquko - isibonelo, ngenxa isizini ongaphakeme, ihhotela ibibhukelwe ivaliwe, uphiwa inketho of Izindawo (ngokuvamile womhlobo ephakeme, kodwa imali efanayo). Uma ayixhumaneki nge e-mail, uzothola ucingo - mobile futhi umile. Ngamafuphi, iningi labantu abasebenzisa le sevisi, ukuyibiza ewusizo kakhulu futhi elula.
Amahhotela Yeisk. Yeisk. Emahhotela aphambili e Yeisk
Sangokushi Club Ihhotela 4 * (Turkey / Dalaman) - izithombe kanye nokubuyekeza
Ihhotela Bach Duong Ihhotela 2 * (Vietnam, Nha Trang): ukubuyekezwa, izincazelo kanye nokubuyekeza
I-Prestige Hotel, iKursk: izibuyekezo zabavakashi
Ihhotela White Lion Hotel 2 *: Ihhotela Izibuyekezo
Isiko futhi magic Wand
Ziyisivikelo umhlane ngesikhathi umsebenzi. Ziyisivikelo ngoba weightlifting
Shrimp: zokupheka salads appetizers
Ukuhambisana umsindo: kanjani amazwi bezalwa?
Yiziphi izimpawu meningitis ukuze usize ekutholweni
Indlela aphathe streptoderma ingane
Sergey Pavlovich Dyagilev: Biography, izithombe, kanye nempilo yakho, amaqiniso athakazelisayo
Rover "trom": Uhlolojikelele, imodeli, incazelo, izici kanye nokubuyekeza
Ngubani abadayisi nendlela abe munye?
"Hemp" - isaladi isiphundu futhi ilula